dvd ụgbọ ala maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012 China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Buick Android Car Dvd > dvd ụgbọ ala maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012
Ihe Nlereanya.: KD-8080
1. Car dvd maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012 - Azụlitere ike nke ahaziri iche: 7dynamic backgrouds dị. Ahịa nwekwara ike iji foto ha dị ka ndabere.
2. Ihe atụ a maka dvd ụgbọ ala maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012 kwụsiri ike ugbu a. Anyị na-anabata ọrụ OEM. Nwere ike iji atụmatụ nke gị maka akara, nkwakọ ngwaahịa na UI. Ike nrụpụta anyị maka dvd ụgbọ ala a maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012 bụ ihe dị ka mkpụrụ ego 20000 n'ọnwa, yabụ, enweghị nchegbu gbasara ngwaahịa a. Anyị ga-anọ ebe a ma nọrọ na njikere inye aka.
3.Our car dvd maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012, nwere ahụmịhe afọ 7 na imebe, n'ichepụta na ire ahịa Car DVD player, anyị emeela mmekọrịta azụmahịa na ọtụtụ ndị ahịa akpọrọ si Japan, Russia, Ukraine, Turkey, Spain, Germany, , Italy, Iran, Pakistan, Dubai, Israel, Korea, Saudi Arabia, India, Brazil, wdg. dvd ụgbọ ala maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012 bụ ihe a ma ama n'ụwa niile.
4. Ugbu a, anyị na-enye ihe karịrị 300 nlereanya android Car DVD player gụnyere ụdị niile maka Buick. Playergbọ ala anyị dvd niile nwere sọftụwia na usoro kachasị ọhụrụ, ọ kwụsiri ike ma dịkwa ngwa. Iji mee ka e jide n’aka na ihe a, dvd ụgbọ ala maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012 nwere asambodo CE / FCC / RoHs / E-MARK. Mkpụrụ obi anyị mma!
Ihe osise ụgbọ ala DVD dick maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012:
Foto nke Klyde na ụlọ nlele
Ngwa nke dvd nke ụgbọ ala maka Buick Excelle GT / XT 2011-2012
Ihe ọkpụkpọ GPS Navigation Hyundai H1 ụgbọ ala dvd Kpọtụrụ ugbu a
Android 7.1 Hyundai TUCSON & IX35 Car Audio Navigation Kpọtụrụ ugbu a
Android 7.1 Hyundai Verna & Accent & Solaris Car Dvd Player Kpọtụrụ ugbu a
Android 7.1 Hyundai I30 Car Multimedia Sistem Kpọtụrụ ugbu a